ပသျှူးသာကူ | Wutyee Food House
« ဘဲသား ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ
ကြက်သား ဒန်ပေါက် »
March 28, 2012 by chowutyee ပသျှူးသာကူ
မြန်မာ နှစ်ကူး သင်္ကြန်အခါ နီးလာပြီမို့။ သင်္ကြန်တွင်း လုပ်စားနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီ သင်္ကြန်မုန့်လုပ်နည်းတွေကို အထူးတင်ဆက်ပေးသွားပါ့မယ်။ အရင်နှစ်က တင်ဆက်ပြီသား သင်္ကြန်မုန့်လုပ်နည်းတွေကိုလည်း ပိုမိုလွယ်ကူပြီ စားလို့ကောင်းတဲ့နည်းတွေနဲ့ ပြန်အသစ် မိတ်ဆက်ပေးသွားပါ့မယ်။ သင်္ကြန်တွင်း သင်္ကြန် မုန့်တွေလုပ်စားရင်း စိတ်ဧ။် ကျန်းမာခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေလို့ Wutyee Food House မှ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်…
ဒါကေတော့ ပသျှူးသာကူးလေးပါ။ ပသျှူးသာကူက ရိုးရိုးသာကူလိုပဲ လုပ်ရတာပါ။ တချို့က ကန်စွန်းဥကိုပြုတ်ပြီ ထည့်တဲ့အတွက် ပိုပြီ ချိုပြီ စားလို့ကောင်းပါတယ်။ ၀တ်ရည်ကတော့ ကန်စွန်းဥအစား အာလူးကို ပြုတ်ပြီ ထည့်ထားပါတယ်။ ပသျှူးသာကူရဲ့ ထူးခြားချက်က ရိုးရိုးသာကူထက် ပိုချိုတဲ့ အရသာကို ရရှိမှာပါ။ လုပ်နည်းလေးကို တူတူလုပ်ကြည့်ရအောင်…
၁။ သာကူစေ့ – ၄၀၀ ဂရမ် (သာကူ အစိမ်းရောင်ထုပ်)
၂။ သကြား – ၄၀ကျပ်သား
၃။ အုန်းနို့နှစ် – ၂၀၀ ဂရမ်
၄။ အာလူး – ၆လုံး (အလုံးကြီး)
၅။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ
၁။ အရင်ဆုံး ဒယ်အိုးတစ်ခုထဲ အာလူးများကို ရေဖြင့် နူအောင်အထိ ပြုတ်ပေးပါ။
၂။ အာလူးများ နူသွားမှ အခွံနွာပြီ လက်မ၀က်အရွယ် အတုံးလေးများ တုံးထားပေးပါ။
၃။ ထို့နောက် သာကူကျိုပါမည်။ သာကူကျိုရန်အတွက် ဒယ်အိုး ၁အိုးထဲသို့ ရေ(၂လီလီတာ) ခန့်ထည့်ပေးပါ။
၂။ ထို့နောက် ရေပွက်ပွက်ဆူလာမှ သာကူများကို ထည့်ပြီး အဆက်မပြတ်မွှေပေးနေပါ။ သာကူစေ့များကို မပြဲစေပါနှင့်။ မမွှေပေးပါက သာကူစေ့များကပ်သွားပါလိမ့်မည်။
၃။ ပြီနောက် သကြားများထည့်ပေးပါ။ သာကူထဲမှ အဆံလေးများ မရှိတော့လျှင် ရပါပြီ။
၄။ ထို့မှ ပြုတ်ထားသော အာလူးများ၊ အုန်းနို့နှစ်များထည့်ကာ ရောမွှေလိုက်ပါ။
၅။ ပြီလျှင် အပေါ်မှ အုန်းသီးလေးများဖြူးပြီ ပသျှူးသာကူကို ပူပူလေး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…
Posted in -မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ | 25 Comments	25 Responses
on March 28, 2012 at 3:53 pm | Reply Cho Wut Hmone
a mike sar par lar…ta kar ma ma eat buu tae buu….
on March 28, 2012 at 3:58 pm | Reply chowutyee
ရိုးရိုးသာကူနဲ့ တူတူပါပဲ၊ ကန်စွန်းဥ(သို့) အာလူးပါတာကလွှဲရင်.. ပြီတော့ သူက ပိုချိုတယ်.. ကိုယ်လည်း လုပ်စားကြည့်လေ..🙂
on April 9, 2012 at 7:45 pm နန်းနွယ် ချယ်ရီ
နန်းလဲ ဟင်းချက်တာ အရမ်းဝါသနာပါတယ်…အခုလို ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ချက်နည်းတွေကို ရေးပေးတဲ့ အမကို အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
on April 10, 2012 at 6:07 am chowutyee
on March 28, 2012 at 9:12 pm | Reply မြတ်
အမစိတ်ထင်တာ သာကူကစိမ်းနေတာလားလို့ ဘာထည့်ထားတာလဲဟင်
on March 29, 2012 at 6:44 am | Reply chowutyee
သာကူ အစိမ်းရောင် အထုပ်ကို သုံးထားလို့ပါ။ တခြားဘာမှ ထပ်မထည့်ထားပါဘူး မမြတ်။ ဟုတ်ကဲ့ ထမနဲလုပ်နည်းတင်ပေးလိုက် ပါမယ်..😀
on March 29, 2012 at 1:10 am | Reply စန္ဒကူးမေ
on March 29, 2012 at 6:45 am | Reply chowutyee
မရေ သက်ြန်ကျရင် လုပ်စားကြည့်နော်..😀
on March 29, 2012 at 3:42 am | Reply mintmon
why those r green colour?
It’s look nicer than regular🙂
on March 29, 2012 at 6:47 am | Reply chowutyee
သာကူအစိမ်းရောင်ထုပ်ကို သုံးထားလို့ပါ။ သာကူ အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ဆိုတော့ ပိုလှသွားတယ်။ City Mart မှာဝယ်လို့ရပါတယ် sis🙂
on March 29, 2012 at 4:09 am | Reply wlphyu
Is it pandan sago?
on March 29, 2012 at 6:49 am | Reply chowutyee
on March 29, 2012 at 5:08 am | Reply Su Myat
on March 29, 2012 at 6:50 am | Reply chowutyee
သာကူ အစိမ်းရောင်ထုပ်လေးနဲ့ လုပ်ထားတာပါ ညီမ။ တခြားဘာမှ မထည့်ထားပါဘူး။ သာကူ အစိမ်းရောင်ထုပ်လေးတွေ City Mart မှာဝယ်လို့ရပါတယ်…🙂
on March 31, 2012 at 8:14 am | Reply ခင်ယမုံ
ခရီးပန်းလာတာနဲ့ ညီမလုပ်ထားတာလေးကိုပဲ အမောပြေစားသွားပြီနော်..
on April 3, 2012 at 3:49 pm | Reply chowutyee
on April 1, 2012 at 1:27 am | Reply baloo
“၄၀ကျပ်သား”, do you have conversion to lbs or kg? thaks
on April 1, 2012 at 10:21 pm | Reply Borar
၀.၆၆ ပိသာ က ၁ ကီလို နဲ့ညီပါတယ်..
၀.၆၆ ပိသာဆိုရင် ၆၆ ကျပ်သား
၄၀ ကျပ်သားဆိုရင်.. ၀.၆၁ ကီလိုဂရမ်နဲ့ ညီပါလိမ့်မယ်…
on April 3, 2012 at 3:53 pm | Reply chowutyee
Thanks for it !😀
on April 4, 2012 at 4:56 am | Reply yupar
a ma . yay .. thank Q .. shan mont nyin chin lote nee lay tin pya pay par oom naw .. arr pay nay par tal🙂
on April 4, 2012 at 5:37 am | Reply chowutyee
ok I will sis !😛
on April 12, 2012 at 12:13 am | Reply zawmike
Just question??? Why this pashue sagu is light green colour did u put ant colouring????Bcoz i try to cook this dessert but i didn’t get green colour??
on April 12, 2012 at 5:15 am | Reply chowutyee
၀တ်ရည်က သာကူကို အစိမ်းရောင် အထုပ်လေးကို သုံးထားလို့ပါ။ သာကူအစိမ်းရောင်လေးကို CityMart မှာဝယ်လို့ရပါတယ်… ဒီလင့်က http://img.21food.com/userimages/tapioca_th/tapioca_th$423195023.jpg နာမူနာ ကြည့်လို့ရအောင်ပါ.. ကျေးဇူးပါ.. 😀
on April 12, 2012 at 6:15 am | Reply tinzar
အုန်းနိ့ က ဘယ်အချိန် ထည့်တာလဲ….ပြောပြ ပေးနော်…..
on April 12, 2012 at 8:10 am | Reply chowutyee
သာကူစေ့များ ရပြီဆိုလျှင် ပြုတ်ထားတဲ့ အာလူးနဲ့ အုန်းနို့ကို ထည့်ရမှာပါ..😛